The Ulwazi Programme – Page 2 – A digital community library of local knowledge in Durban, South Africa
Siqhubeka noCharlotte Mannya Maxeke
Emakhisini adlule sibhunge ngomlando kamama Charlotte kodwa nakhona besiwukhela phezulu njengombila, saphinda sathinta nendaba yosuku lwentsha nokuqashwa kwaya ithobe amathuba omsebenzi. Lana ke siqhubeka nomlando wakhe nokuthi kwenzeka kanjani ukuthi aze ayofunda phesheya kwezilwandle. Sikuvezile ukuthi umndeni kaCharlotte wathuthela eKimberly emuva kokuthola idayimane. Kuthe ke ekufikeni kwabakubo eKimberly wabe eseqala ukufundisa izifundo zolimu lwesintu kubantu … Read more
Categories People Tags Charlotte Mannya Maxeke
UMichael Paul Sibisi
UMichael Paul Sibisi wazalelwa eMkhumbane, eThekwini ngomhlaka 23 Septhemba 1948. Waya e-Chersterville Secondary School lapho aqeda khona ibanga 9 ngo-1965. Waqhubeka nokufundela ubuthishela e-Adams Teachers ‘Training College. Ithalente lakhe lavulwa ngu-Innocent Masondo owayenguthisha wakhe. Njengoba zazingekho izifundo zobuciko e-Adams College, wasebenzisa iseluleko sikaMasondo wafaka isicelo sokuyofunda eNdaleni Educational Training School ngaphansi kuka-Lorna Peirson ngosizo lwezezimali … Read more
Categories People Tags Michael Paul Sibisi
Umculi uPatty Nokwe wazalelwa eShowe ngomhlaka 26 Juni 1931. Wafunda e-St Michaels School lapho ayebambe khona ekhwayeni yesikole wafunda futhi e-M.L. Sultan Technikon. UPatty washada nombhali wemidlalo yeshashalazi ongasekho nomculi u-Alfred Nokwe ngo-1954. Izingane zabo ezimbili uTu noMarilyn nabo banamakhono kwezomculo. Amakhono ezwi likaNokwe aqapheleka ngesikhathi ehlolisisa ikhwaya ye-SABC; wahlaba umxhwele uMadame Davi kangangoba waze … Read more
Categories People Tags Patty Nokwe
I-Durban City Hall izolungiswa kabusha
I-Durban City Hall isakhiwo esidala ethekwini, saqeda ukwakhiwa ngo-1910. Lesi sakhiwo sadwetshwa (designed) isazi sokwakha (architect) uStanley Hudson ngonyaka ka-1903 esisusela kumfanekiso weBelfast City Hall eyaphuthulwa ngo-1906 eNorthern Ireland. Isakhiwo esiyigugu eThekwini iCity Hall kulindeleke ukuba silungiswe kabusha ngemuva kweminyaka ewu-110 sabakhona. Lesi sakhiwo sidlala indawo ebalulekile yokuphathwa kwedolobha iTheku, siphinde sibe yindawo yehhovisi leMeya … Read more
Categories History, News, Places Tags Durban City Hall, I-Durban City Hall
I-42nd Durban International Film Festival
Minyaka yonke iCentre for Creative Art (CCA) yase Nyuvesi yaKwaZulu Natal isingatha iDurban International Film Festival (DIFF) eyasungulwa ngo-1978. Nonyaka ibingomhlaka 22 Julayi yaphela ngezi 1 Agasti. Le festival ibigubha iminyaka engu-42 yabokhona, ithathwa njengeyokuqala ifestival yamafilimu eNingizimu Afrika. Iminyakeni edlule lefestival ibikhombisa (screenings) amafilimu (short films, feature films and documentaries) ezindaweni ezahlukene zeTheku singabala … Read more
Categories News Tags DIFF, Durban International Film Festival